हेमालाई घरबेटीले को:’ठा’बाट नि:’का’ले, ‘लु’गा समेत ‘नि’:काल्न दिएनन् – भिडियो हेर्नुहोस् – Namaste Host
March 16, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on हेमालाई घरबेटीले को:’ठा’बाट नि:’का’ले, ‘लु’गा समेत ‘नि’:काल्न दिएनन् – भिडियो हेर्नुहोस्
बिचरा ! हेमालाई घरबेटीले को:’ठा’बाट नि:’का’ले, ‘लु’गा समेत ‘नि’:काल्न दिएनन् । भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ । याे पनि पढ्नुहाेस् : नेपाली संगीत उद्योगमा पछिल्लो समय
सबैभन्दा मन पराइएका सर्जक हुन् राजनराज सिवाकोटी । उनी गायन र संगीत भर्न पनि माहिर छन् । राजनराज संगीत विधाका तीनै क्षेत्रमा सक्षम छन्, सोही कारण उनी लोकप्रिय पनि छन् । उनले छोएका हरेकजसो गीत १ किसिमले चर्चामा आउँछन्, यूट्युबमा करोडभन्दा धेरै भ्युज आउँछ । सिवाकोटीले तयार पारेको ‘फुलबुट्टे सारी’ बोलको पछिल्लो गीत लोकप्रिय बन्यो । यसको मेल, फिमेल भर्सनका साथै चाइल्ड भर्सन समेत बनेको छ ।
सबै गीतले पाएका भ्युज असाध्यै लोभलाग्दा छन् । धेरै गायक, गीतकार, संगीतकारका लागि राजनराज आइडल बन्न पुगेका छन् । धेरैले भन्छन्, ‘ह्वाट इज द आइडिया अफ रिचिङ करोड क्लब ?
याे पनि पढ्नुहाेस् : तपाईंले प्याजको अचार (चटनी), टमाटरको अचार वा धनियाँको अचार खानु भएको होला वा यसबारे सुन्नु भएको होला । तर के तपाईंले कहिल्यै कमिलाको
यो पनि पढ्नुहोस् स् यो समयमा सामाजिक संजालमा सर्बाधिक भा ‘इ’र’ल भएको एक आवाज हो मुस्लिम गायक आलिफ खान । उनको आवाजलाई लिएर यो समय फेसबुक देखि युटुब
तिर सर्बाधिक चर्चा छरिएको छ। यो समयमा मिडियाले उनको खोजि गरिरहेको छ। बिगतमा कसैको साथ् र माया नपाएका आलिफ यो बेला दर्शकको माया पाउदा निकै चकित भएका छन
भने दर्शक संग उनको अझ नजिक हुने बाटो बन्न थालेको छ । लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्त को सुमधुर आवाजमा प्रतिभाशाली कलाकार अलिफ खानको लय संकलनमा बहुप्रतिभाका
धनि सन्तोष कटवाल र क्षितिज श्रेष्ठ को शब्द सिर्जनामा बनेको मन छुने आधुनिक गित नरुनु है बजारमा बजारमा सार्बजनिक भयको छ । भिडियो तर्फ बिज्ञान राइको निर्देशन रहेको छ भने अर्जुन तिवारीको छायांकन रहेको छ र बिज्ञान राइको
उत्क्रिष्ट सम्पादन रहेको छ । उक्त मन छुने आधुनिक गीतमा नायिका शिल्पा पोख्रेल र साहिल खानको उत्क्रिष्ट अभिनय रहेको छ । उक्त गीतलाइ सलिना म्युजिक को आधिकारिक युटुब च्यानल मार्फत बजारमा सार्बजनिक गरियको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा यत्रतत्र भाइरल भईरहेका मुस्लिम गायक अलिफ खानको आवाजमा रहेका गितहरु बजारमा सार्बजनिक भईरहेका छन् ।